DEG DEG: Madaxweyne Farmaajo oo si qarsoodi ah ula kulmay Sheekh Shariif iyo Waxa ay kawada hadleen - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
DEG DEG: Madaxweyne Farmaajo oo si qarsoodi ah ula kulmay Sheekh Shariif iyo Waxa ay kawada hadleen
Nov 6, 2019 - Comments off
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed haddana ah Hoggaamiyaha Madasha Xisbiyada Qaran ayaa kulan qarsoodi ah la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Xubno ka tirsan Xisbiga Himilo Qaran ayaa si hoose inoo sheegay in Sheikh Shariif uu kulan qarsoodi ah uu la yeeshay madaxweyne Farmaajo,isagoo kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin nuuca doorashada sanadka 2021 iyo caburinta lagu hayo siyaasiyiinta ka aragti duwan Dowladda Federaalka,waana walaaca ugu badan oo uu sheikha iyo dad la mid ah uu qabeen.
Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa runta u sheegay madaxweynaha,wuxuuna ku adkeeyay iney waajib tahay Dowladda uu hoggaamiyo iney sharci dalka dhowrto una hoggaansanto.
Sida aan xogta ku heyno, Hoggaamiyaha Madasha Xisbiyada Qaran ayaa horay u diiday dalab kulan ah oo kaga yimid madaxweyne Farmaajo,isagoona kaga jawaabay in shalay uu ahaa shaqsi balse maanta uu hoggaamiyo Xisbi muhiimna ay tahay in Hoggaankeeda qeyb ka noqdaan kulanka.
Dowladda Federaalka ayaa lagu heystaa ineysan ilaa iyo hadda kala cadeyn nuuca doorashado ee dalka ka qabsoomeysa,maadama mudo xilleedka Dowladda sanad iyo bilal uun ka harsan yihiin,waxaana jira walaac ah iney mudo kororsi sameeyaan Kooxda Villa Soomaaliya.